မြန် မာ ဗီ စီ ဒီ ကာ ရာ အို ကေ သီ ချင်း များ စု စည်း တင် ဆက် ခြင်း
Original Song Karaoke Song
ဝိုင်ဝိုင်း (ဖြေသိမ့် လိုက် )
(. . . . . . . အ မျိုး သ မီး တေး သံ ရှင် များ . . . . . )Noရေဗက္ကာဝင်းL-ဆိုင်းဇီbambinoချစ်သုဝေချောစုခင်တင်ဇာမော်ခင်ဘုဏ်းမို့မို့မီးမီးခဲထွန်းအိဒ္ဒြာဗိုရွှေထိုက်အေသင်ချိုဆွေဝိုင်းစုခိုင်သိန်းချမ်းချမ်းဆုန်သင်းပါရ်ယုဇနကြိုးကြာငယ်ငယ်ဆွီတီဇမ်နူးမဒီရတနာဦးရှင်ဖုန်းနော်လီဇာN-ကိုင်ရာစန္ဒီမြင့်လွင်နီနီခင်ဇော်မို့မို့ဇော်ဝင်းသီရိဆွေအေးချမ်းမေဖြူဖြူကျော်သိန်းနွဲ့ယဉ်ဝင်းBLUEBERRYNG2Kcaloryကာကာခင်စုစုနိုင်ခွန်းဆင့်နေခြည်ဂျင်းနီစင်ဒီဆူဇီတင့်တင့်ထွန်းဒိုရေမီနန္နာမီမီဝင်းဖေမီးနိုရတီပွင့်ဦးရတနာသဇင်သရဖီတင်သံသာဝင်းသျှီအားမူအိန်အိန်းကော်နီကဗျာဘွဲ့ မှူး နေနေမေစံပယ်ညိုမေဆွိမေသူလေးလေးဝါးဟေမာနေ၀င်း ဟယ်လင်ဘေဘီ ငဲ့ငယ်လေး အဒဲ ဧကရီ Popcorn ရတနာမိုင် ခေမီကို အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် တွယ်တာ အိမ့်ချစ် ယိင်းယိင်း နိနီး ချိုသဲ အိဒြာကျော်ဇင် စိုးပြည့်သဇင် တွင်ကယ် မိမိုးမိုးဦး ဝင်းလဲ့သူ
(. . . . . . . အ မျိုး သား တေး သံ ရှင် များ . . . . . . )လေးဖြူအငဲထူးအိမ်သင်R-ဇာနည်ဇော်ဝင်းထွဋ်မျိုးကြီးဝိုင်ဝိုင်းရင်ဂိုဟန်ထူးလွင်အဲလက်(စ)ဇော်ပိုင်ချစ်ကောင်းL-လွန်းဝါခင်မောင်တိုးခင်မောင်ထူးစိုင်းထီးဆိုင်မာရဇ္ဒမျိုးကျော့မြိုင်ခိုင်ထူးဒိုးလုံးလှိုင်ဦးမော်မနောဂရေဟမ်နောနော်ဖိုးကာမောင်မောင်ဇော်လတ်Black Holeခင်ဝမ်းဂျက်မြသောင်းစည်သူလွင်စိုးလွင်လွင်ဆင်ပေါက်ဗလလွှမ်းမိုးဟဲလေးအယ်ဖြူထူးအယ်လင်းဘိုဖြူသအိုဟန်ထွန်းဆောင်းဦးလှိုင်ညဏ်လင်းအောင်အောင်လ(Reason) ရေမွန်(Idiots) ဖော်ကာ(Wanted) A-နွန်NG2Kလင်းလင်းဂျီလတ်ထွဏ်းခမ်ထွန်းထွန်းဒီဖြိုးပူစူးဘိုဘိုဘရိတ်ကီမိုးမိုးရိန်မိုးလင်းနစ်ဝိုင်စတုန်းသန်းနိုင်(ပလေးဘွိုင်း)ဟန်ဒီဆက်ရာစုဂျေမီဂျေမောင်မောင်နေမျိုးဗစ်တာခင်ညို v-နိုထွန်း သြရသ ဘန်နီဖြိုး အစ္စဏီ system(စစ်စတမ်) ဗဒင်IMPတိမ်ချမ်း မန္တလေးသိန်းဇော် ဖိုးသောက်ကြာ ရာဇာနေဝင်း ငဲငယ် စံလင်း ဒီမွန် ခိုင်မြဲသာ ဒီရေတိုး ငြိမ်းစည်သူ အက်စစ် ဒေါင်လွဏ်း ဆိုတေး Waiလျှံ ကေကေတီ
( . . . . . . . . . . . . စုံတွဲသီချင်းများ . . . . . . . . . . .) L-လွန်းဝါ ၊ ဆူဇီ (မိုးဘယ်မှာရွာနေလဲ) L-လွန်းဝါ ၊ ဆူဇီ (စိတ်ညစ်မှာစိုး) လင်းလင်း ၊ ချစ်သုဝေ (နားလည်မှု) R-ဇာနည် ၊ ကြိုးကြာ (လွဲနေတဲ့စုံမှတ်များ) ထွဏ်းခမ် ၊ ဇမ်နူး (ပြန်ဆုံချိန်) အနဂ္ဂ ၊ သံသာဝင်း (ဂီတာကြိုးလေးပြတ်သွားပြီ) ဟဲလေး ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း (မသိလမ်း) L-လွန်းဝါ ၊ ကဗျာဘွဲ့ မှုး (အဆုံးမဲ့) R-ဇာနည် ၊ L-ဆိုင်းဇီ (မင်းအကြောင်းအိပ်မက်) ထူးအိမ်သင် ၊ မဒီ (ရင်ခွင်ပျောက်သူ) မေစံပယ်ညို ၊ မိုးမိုး (မိုးနဲ့ အတူငိုနေမယ်) သြရသ ၊ အေသင်ချိုဆွေ (လမ်းမခွဲကြေး) ထူးအိမ်သင် ၊ အိ (ကာရံမညီသော) ထူးအိမ်သင် ၊ အိ (ရင်ခုန်ရင်အချစ်) ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၊ ဖြိုးကြီး (အချစ်) ကောင်းကောင်း ၊ မို့ မို့ လွင် (မင်းကိုသတိရရင်) ဖိုးကာ ၊ ချောစုခင် (အိမ်ပြန်ချိန်) ဝိုင်ဝိုင်း ၊ မီးမီးခဲ (ရေဆန်လမ်း) ဘိုဘို ၊ မဒီ (လွဲနေတဲ့စုံမှတ်များ) ဝိုင်ဝိုင်း ၊ မဒီ (ဆန္ဒတစ်စုံ) လေးဖြူ ၊ မဒီ (အရည်ပျော်ခြင်း) ဇော်ပိုင် ၊ ချောစုခင် (ဒါဟာအချစ်လား) ဇော်ပိုင် ၊ ချောစုခင် (အတူစုံချင်ပြီ) ထူးအယ်လင်း ၊ မီးမီးခဲ (တွဲလက်များ) R-ဇာနည် ၊ ဆုန်သင်းပါ (ရှေ့ ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ) ဟေမာနေဝင်း ၊ မင်းဦး (ပိုးစုန်းကြူး) မင်းမော်ကွန်း ၊ မို့ မို့ (မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ) ထူးအိမ်သင် ၊ မို့ မို့(မျက်စိမှိတ်ချစ်နေမယ်) ဒွေး ၊ သီရိဂျေမောင်မောင် (ပေးဆပ်ခြင်းများစွာနှင့်) ရန်အောင် ၊ ချောစုခင် (နေ့ တိုင်းညတိုင်း) ခင်မောင်ထူး ၊ မယ်လိုဒီ (ခွဲမသွားနဲ့ အချစ်ရယ်) မျိုးကျော့မြိုင် ၊ ကြည်လဲ့လဲ့ဦး (အချိန်နဲ့ နေရာ) ဟန်ထွန်း ၊ မဒီ (လမ်းခွဲစကား) စောအဂ္ဂ ၊ L-ဆိုင်းဇီ (အတူတူ) ဝိုင်ဝိုင်း ၊ ကြိုးကြာ (မဆုံတဲ့ဖူးစာ) R-ဇာနည် ၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း (လိုက်ဖတ်တဲ့ဘဝ) ဂရေဟမ်၊ရတနာဦး (မင်းပဲအနားမှာနေ) ချောစုခင် ၊ ဘရိတ်ကီ (မိုးနဲ့ အတူငိုနေမယ်) ဟဲလေး ၊ ရတနာမိုင် (လမ်းခွဲဖို့ မပြောနဲ့ ) ရဲလေး ၊ အေသင်ချိုဆွေ (သီးသန့် တွေ့ စုံဆုံခန်း) အောင်လ ၊ ရတနာမိုင် (ချစ်ခြင်းအလင်္ကာ) ဖိုးကာ ၊ ချမ်းချမ်း (ခရစ္စမတ်သီချင်းသံ) ဘရိတ်ကီ ၊ ထွန်းအိဒ္ဒြာဗို (အဖြူနဲ့ အမည်း) ကြိုးကြာ ၊ ညီရဲ (ချစ်ကံဆိုး) ရှင်ဖုန်း ၊ ဖြိုးကြီး (ဘာကြောင့်) လေးဖြူ ၊ ဒီဒီ (လမ်းဟောင်းလေးသို့ အလွမ်း) R-ဇာနည် ၊ ငယ်ငယ် (အပြစ်ရှိလား) အောင်လ ၊ မေသူ (ဒီအတိုင်းလေးပဲချစ်နေမယ်) မိုးသက်တင် ၊ ဟေမာနေဝင်း (ဝါဆို) ရဲလေး ၊ Bambino (ပြောမထွက်ခဲ့သူ) R-ဇာနည် ၊ ဆုန်သင်းပါရ် (ရင်ခုန်သံတွေမရပ်ဘူး) ပီတာ ၊ အေသင်ချိုဆွေ (ချစ်ကံဆိုး) အဲလက်(စ) ၊ ထရေစီ (ဆုံနိုင်ခွင့်) L-လွန်းဝါ ၊မယ်လိုဒီ (အချစ်ဖော်ကောင်) Raymond ၊ ချမ်းချမ်း (မင်းရဲ့အရိပ်ကလေး) မိုးဇက် ၊ ရေဗက္ကာဝင်း(မင်းနဲ့ အတူ) ထွန်းအိဒ္ဒြာဗို ၊ မျိုးကျော့မြိုင်(မိုးလေးဖွဲတုန်း) အောင်သီဟ ၊ အေးမြတ်သူ(ရင်ခုန်သံအမြန်နှုန်း)
ရင်ဘတ်ထဲကလူ (အက်ဆေး -၃)
Tribute to Mr. Robin
U Win Myint (President of Myanmar)(PSD ဖိုင်အကြည်)
IT Reshare Site
Facebook Account Hacking
Menyediakan Kontak BBM Murah Bergaransi
ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် soccer weekly hight light
Augsburg 0-4 Borussia Dortmund
ဟားခါး၊ စတော်ဘယ်ရီ နှင့် အမှတ်တရများ
Knowledge and Sharing
Skynet up to date channel လိုင်းအသစ်
မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) အခြေခံပညာသင်ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်
မြန်မာလို နည်းပညာ စာအုပ်များ